Abavelisi bobuhle kunye noKhathalelo lobuNtu - China Ubuhle kunye noKhathalelo lwaBucala abaXhasi kunye neFektri
Ukuphola okupholileyo okushushu / okunyangayo kunyango lweGel Bead ebusweni
Ubungakanani beMaski: 64 * 30.5 cm, 220g
Ungayithengisa ngokuthe ngqo ngephakeji nganye okanye ngesixa sayo njengesipho sokunikwa kwindawo yokuhlamba okanye iimeko zobuhle.
Gel Beads Spa Therapy Wrap for Sinus Pressure Face Puffiness Headaches TMJ, migraines .Sebenzisa njengoncedo lonyango lweemeko zokulala kunye nokungabikho komzimba.
I-Gel bead ice ice eye mask yokucinezela
Isixhobo: PVC / EVA / TPU
Isithako: I-Gel, ingongeza i-glitter
I-OEM: imilo ebengezelayo okanye umbala, ilogo eprintiweyo okanye ilebhile yokuthunga, iindlebe zekhathuni ze-3D, ilaphu eliphambili lokuprinta ngokubanzi, ibhokisi yephakheji okanye ibhegi, ibhokisi yokubonisa yokubonisa.
Supply amandla: iziqwenga 1000000 / ngenyanga nganye.
I-1.Ipakethe eshushu kunye nepholileyo ngumqamelo othambileyo, ogcwalise ijeli obandayo kwisikhenkcezisi sakho, ekulungeleyo ukusetyenziselwa ukukhulula iintlungu ekhaya.
Ihlala icolekile kwaye inokusetyenziswa nakweliphi na ilungu lomzimba, iyenze ilungele amaqhuma amancinci, imivumbo, iintlungu zemisipha, ubunzima, ukuqaqanjelwa yintloko, ukuqaqanjelwa yintloko, ukutsha kancinci kunye nokulunywa zizinambuzane.
3.Simply Beka iipilisi zomlomo weCold lip ezinokuphinda zisebenze kwisikhenkcisi emva kokusetyenziswa ngakunye, kwaye zilungele ixesha elizayo.
Yindlela elula yokufaka uncedo lokuqala olubandayo. Isimbozo selaphu sifakiwe kwintuthuzelo enkulu.